UMosimane uziphindiselela kwabamgxekayo | Scrolla Izindaba
UMosimane uziphindiselela kwabamgxekayo
Besebasha bebuya emkhankasweni wabo we-Fifa Club World Cup, i-Al Ahly iqale isicoco sayo se-Caf Champions League ngokunqoba ngamagoli amathathu eqandeni bedlala ne-Al-Merrikh yase-Sudan.
Ngesikhathi uMosimane ethatha izintambo esihlalweni esishisayo se-Red Devils ngoMfumfu, ikilabhu ibivele isisezingeni lokugcina lomncintiswano abagcina bewunqobile. Emdlalweni wakhe wokuqala, uMosimane ushaye i-Moroccans iWydad Casablanca kuma-semi final wabe esehlula i-Zamalek ngamagoli amabili kwelilodwa kowamanqamu e-Egypt.
NgoLwesibili ebusuku, amagoli amathathu esiwombe sesibili kaMohamed Magdy, uMahmoud Kahraba noWalter Bwalya anikeze uMosimane isiqalo abekade asifuna ku-Group A. Umphumela uthathe i-Ahly phambili etafuleni, ibambene ne-Simba yase-Tanzania.
I-Simba inqobe umdlalo wayo wokuvula ngegoli elilodwa eqandeni bedlala ne-As Vita Club yase-Democratic Republic of Congo ngoLwesihlanu olwedlule.
Ukuhlala kukaMosimane ku-Ahly kuyaqhubeka nokuba nzima njengoba abaqeqeshi abayizimbangi nabadlali bakudala behlale bemhlasela. Muva nje uDiaa El-Sayed owayengumdlali we-Ahly uthathe isibhaxu kuMosimane ethi ufuna ukuqinisa abadlali bakhe abaphambili. Uphinde wasola abaphathi beqembu ngokumvikela.
“Ibhodi lithathe isinqumo sokuqasha uMosimane ngoba bebengenaso isikhathi. I-Al Ahly imvikela ekugxekweni futhi lokhu kujwayelekile ekilabhini,” kusho u-El-Sayed etshela i-ON Time Sports.
“Okwenziwe nguMosimane ngesikhathi ephuma obala ecela ukusayinwa ngaphambi kokuhlala nabaphathi kwakungalungile. Lezi zinto kumele zenziwe ngasese.”
Umqeqeshi we-Al-Merreikh uNasreddine Nabi uphinde wakhwela wadilika kuMosimane ngaphambi kokushaywa ngamagoli amathathu eqandeni ngoLwesibili.
“Bengilindele ukubona umdlalo ongcono ophuma ku-Al Ahly kwi-Fifa World Cup, kodwa umqeqeshi unelungelo lokukhetha indlela abona ukuthi iyifanele kakhulu i-Al Ahly,” kusho uNabi.
Umdlalo olandelayo kaMosimane we-Champions League use-Simba ngoLwesibili oluzayo kanti i-Al-Merreikh izokwamukela i-Vita Club ngosuku olufanayo.